Ma doonaysaa in ay ku raaxaystaan ​​filimada 2D aad sida mid ka mid ah 3D? Maqaalkani waxa aad ku talin doonaa qalab diinta video weyn si loogu badalo wax filimada 2D bixi ama macmal ah si MP4 3D. Waxaad ku raaxaysan kartaa 3D filimada MP4 guriga laakiin sida ee shineemo iyo aad u hesho madadaalo ah oo cad, oo dhab ah muuqaal. Qalab lagula talinayaa ayaa kubad xawaare diinta si degdeg ah, oo tayo leh wax soo saarka khasaaraha-yar iyo waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan. Just aad u hesho hoos ku qoran.
Best 2D in 3D MP4 Video Converter for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
• Beddelaan videos in kasta oo qaab si 3D ay ka mid yihiin MP4 3D, 3D MKV, 3D wmv, 3D AVI, iyo in ka badan.
• Gubashada ku dhowaad dhammaan videos ay u DVD disk inay ku raaxaystaan ​​shaashad weyn.
• videos Edit leh hawlaha weyn video tafatir sida falinjeeerka, lana siii, Cinwaan ku daray, iwm
• presets filaayo in diinta video si toos ah u qalabka sida iPhone, iPad, iyo telefoonada Android.
• Download videos ka goobaha la wadaago badan video, YouTube, Facebook, Dailymotion, iwm
Qaybta 1aad: Sida loo Beddelaan 2D in MP4 3D la Wondershare Video Converter
Qeybta 2: More fursadaha: 2D Free in 3D MP4 Converter, iyo Online 2D in 3D MP4 Converter
Qaybta 1aad: Sida loo badalo 2D in MP4 3D
Hoos ku hel si aad u aragto sida ay u badalaan 2D in MP4 3D ee Windows (Windows 10 ka mid ah). Dadka isticmaala Mac, kaliya aad u hesho tutorial halkan, Sida loo Beddelaan 2D in MP4 3D ee Mac .
1. Import 2D files si 2D in ay Converter MP4 3D
Si toos ah jiidi aad 2D caadi videos markaas hoos u MP4 Converter 3D ama guji "Add Files" menu ku darto fayl video for files helidda video galka ah oo dhan hal mar. Wareejinta waxaa Dufcaddii taageero barnaamijka kaas oo awood kuu si loogu badalo dhawr videos 2D in files MP4 3D on go ah.
2. MP4 Set 3D sida qaab wax soo saarka aad
Tan iyo markii aad u baahan tahay qaar ka mid ah files MP4 3D, halkan waxaad dooran kartaa haddii ay dhacdo in aad leedahay koob 3D Anaglyph red-cyan, ma qalab gaar ah ama software ciyaaryahan warbaahinta u baahan; iyo dooran haddii bandhigay 3D aad isticmaala hab madoobaad ama farsamooyinka kale 3D.
3. Start si loogu badalo 2D video in MP4 3D
Guji "Beddelaan" ha Video Converter Ultimate dhammayn inteeda kale si toos ah. Hadda, qalabayn koob 3D iyo dajiyaan, kuwaas oo ku badaley files MP4 3D galay ciyaaryahan oo bilaabi aad waayo-aragnimo 3D theatric guriga! BTW, waxaad sidoo kale gali kartaa, kuwaas oo files si aad bogga YouTube 3D ah ee la wadaago.
1. Si loo hagaajiyo aad waayo-aragnimo dheeraad ah oo warbaahinta la yaab leh, MP4 ka Converter 2D in 3D intaa ku siinayaa qaar ka mid ah hawlaha edit waxtar leh sida abuurka, ku dar saamaynta qabow iwm Si aad wax badan oo ku saabsan arrintan bartaan, waxaad tagi kartaa hage user ee Video Converter Ultimate .
2. Riix Link in badan oo ku saabsan bartaan farqiga u dhexeeya video Anaglyph Red / Cyan 3D iyo Side-by-Side 3D ​​video .
Sida loo Guba MP4 in DVD
Sida loo dar subtitles in MP4
Sida loo rogo ama YouTube in MP4
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan 2D in MP4 3D fudayd